विप्लवकाे बैठक स्थलमै कसरी पुग्यो प्रहरी? - Sutra TV Sutra TV
राप्ती ब्युरो पूरै खाली, नेकपालाई ठूलाे धक्का "
दाङ– दाङको गढवामा बैठक बसिरहेको स्थानबाट प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका माथिल्लो तहका २१ नेतालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनीहरु एउटा घरमा बैठक बसिरहेका थिए । गस्तीमा गएको प्रहरीले त्यहाँ छापा मारेको थियो ।
गए राति २ बजेतिर नेपाल भारत सीमामा पर्ने उक्त ठाउँबाट उनीहरुलाई प्रहरीको गस्तीमा गएको टोलीले पक्राउ गरेको हो । दाङ प्रहरीका प्रवक्ता विनोद विक्रम शाहकाअनुसार उनीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याइसकिएको छ।
को को छन् पक्राउ पर्नेमा ?
– चन्द्रबहादुर चन्द (वीरजंग) –केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी ब्यरो ईन्चार्ज तथा मध्य पश्चिम कमाण्ड ईन्चार्ज तथा विप्लवका दाजु
– केशवबहादुर बाँठा मगर (सुवास) –राप्ती ब्युरो ईन्चार्ज
– रामबहादुर थापा (सुन्दर) – राप्ती ब्युरो एवम न्याय विभाग समिति जिल्ला संयोजक
–सविन पोख्रेल – राप्ती ब्युरो कार्यालय सचिव
–यमलाल कटुवाल –विक्रम) – जिल्ला ईन्चार्ज
–प्रदीप वली – जिल्ला सेक्रेटरी
–बविन केसी (पाटन, जंगली) – युवा संगठन नेपाल केन्द्रीय अध्यक्ष
–सुनिल पौडेल– वुद्धिजिवी
–एकराज चौधरी (एरिया नम्बर ४ ईन्चार्ज एवम जिल्ला जनपरिषद् सदस्य)
–धनबहादुर बोहोरा –महान) – एरिया नम्बर १ ईन्चार्ज एवम राजपुर गाउँपालिका सेक्रेटरी
–तिलक पुन (पूर्व जनमुक्ति सेना)
–सुरज विक –दलित राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जिल्ला अध्यक्ष
–हितप्रसाद रोका –पार्टी सदस्य
–पोष्टमान घर्ती – रोल्पा जिल्ला सदस्य
–अमित घर्ती मगर
कसरी पुग्यो प्रहरी ?
केही दिन पहिले प्रहरीलाई एउटा गोप्य सूचना आएको थियो। नेपाल भारत सीमाको राजापुर गाउँपालिका–४ स्थित मरेठाको जंगलमा विप्ल्वका उच्च तहका नेताहरको बैठक बस्दैछ भने।
इलाका प्रहरी कार्यालय गढवाबाट २३ किलोमिटरको पश्चिम–दक्षिणमा पर्ने उक्त क्षेत्रमा प्रहरीले निगरानी बढाएको थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रदेश ५ को प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट थप प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो । ठूलो संख्यामा राति नै जंगल पुगेको प्रहरीले विप्लवका दाजु तथा मध्यकमाण्ड इन्चार्ज चन्द्रहादुर चन्द (वीरजंग)सहितका २१ नेता पक्राउ परे ।
विप्लव नेकपालाई ठूलो धक्का
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म विप्लव समूहका १ हजार ५ सय १४ जना पक्राउ परिसकेका छन्। तीमध्ये १ सय ४८ जना नेतृत्व तहका रहेका छन्। यसअघिनै ४३ जिल्ला इन्चार्ज पक्राउ परेका छन्। जसले गर्दा नेतृत्व तहमै नेकपा कमजोर बन्दै गएको प्रहरीले विश्लेषण गरेको छ।